Genesisi 49 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Uprofita hwaJakobho hwaakataura ava kufa (1-28)
Shiro achabva kuna Judha (10)
Jakobho anotaura kwaachada kuvigwa (29-32)
Kufa kwaJakobho (33)
49 Jakobho akashevedza vanakomana vake akati: “Unganai kuti ndikuudzei zvichaitika kwamuri mumazuva ekupedzisira. 2 Unganai muteerere, imi vanakomana vaJakobho, teererai Israeri baba venyu. 3 “Rubheni,+ ndiwe dangwe rangu,+ simba rangu nekutanga kwesimba rangu rekubereka, mukuru pakukudzwa uye mukuru pakuva nesimba. 4 Nekusazvidzora kwako semvura ine simba isina kugadzikana, wakakwira pamubhedha wababa vako,+ saka hausi kuzova mukuru. Pawakadaro wakasvibisa mubhedha wangu. Chokwadi kukwira pauri here! 5 “Simiyoni naRevhi mukoma nemunin’ina.+ Zvombo zvavo zvinongoshandiswa kurwa vachiuraya.+ 6 Usaenda pavanenge vari, haiwa mweya* wangu. Usabatana neungano yavo, haiwa mwoyo wangu,* nekuti hasha dzavo dzakaita kuti vauraye vanhu,+ uye vakadimbura marunda* emakumbo emombe vachizviitira kunakidzwa. 7 Kutsamwa kwavo ngakutukwe, nekuti kune utsinye, uye hasha dzavo ngadzitukwe, nekuti dzakanyanyisa.+ Rega ndiite kuti vapararire pakati paJakobho, uye rega ndiite kuti vapararire pakati paIsraeri.+ 8 “Kana uri iwe Judha,+ vana vababa vako vachakurumbidza.+ Ruoko rwako ruchava pamitsipa yevavengi vako.+ Vanakomana vababa vako vachakukotamira.+ 9 Judha mwana weshumba.+ Mwanakomana wangu, uchadya mhuka, wosimuka. Avhumbama uye azamura sezvinoita shumba. Akafanana neshumba, saka ndiani angashinga kumumutsa? 10 Tsvimbo yeumambo haizobvi kuna Judha,+ uye mudonzvo wemutungamiriri hauzobvi pakati petsoka dzake, kusvikira Shiro* auya,+ uye marudzi achamuteerera.+ 11 Achasungirira dhongi rake pamuzambiringa, nemwana wedhongi rake pamuzambiringa wakanaka kwazvo, ogeza zvipfeko zvake muwaini uye nguo yake muropa remazambiringa. 12 Maziso ake akatsvuka newaini, uye mazino ake akachena nekunwa mukaka. 13 “Zebhuroni+ achagara pamhenderekedzo yegungwa, pamhenderekedzo panomiswa ngarava,+ uye muganhu wake wekure uchange wakatarisa kuSidhoni.+ 14 “Isakari+ akaita sedhongi rine mapfupa akasimba, rinorara rakatakura tsapo mbiri pamusana paro. 15 Uye achaona kuti nzvimbo yake yekuzororera yakanaka uye kuti nyika yacho inofadza. Acharereka pfudzi rake kuti atakure mutoro uye achabvuma kuita basa rekumanikidzwa. 16 “Dhani+ achatonga vanhu vake serimwe remadzinza aIsraeri.+ 17 Dhani ngaave senyoka iri parutivi pemugwagwa, nyoka ine nyanga iri parutivi penzira, inoruma zvitsitsinho zvebhiza zvekuti mutasvi waro anodonha negotsi.+ 18 Ndichamirira ruponeso runobva kwamuri, haiwa Jehovha. 19 “Kana ari Gadhi,+ achasvikirwa neboka revapambi romurwisa, asi iye achavatevera ovarwisa nekumashure.+ 20 “Zvekudya* zvaAsheri+ zvichawanda,* uye achapa vanhu zvekudya zvakakodzera kupiwa mambo.+ 21 “Naftari+ isheshe yenondo yakatetepa. Ari kutaura mashoko akanaka kwazvo.+ 22 “Josefa+ inhungirwa yemuti unobereka michero, muti unobereka michero uri pedyo nechitubu, une mapazi anotambanuka nepamusoro perusvingo. 23 Asi vanopfura neuta nemiseve vakaramba vachimunetsa uye vakamupfura, vakaramba vachimuvenga.+ 24 Asi uta hwake hwairamba huri munzvimbo yahwo,+ uye maoko ake akaramba akasimba.+ Izvi zvaibva mumaoko aiye ane simba waJakobho, kumufudzi, dombo raIsraeri. 25 Anobva* kuna Mwari wababa vako, uye achakubatsira, uye ane Wemasimbaose, achakukomborera nemakomborero ekudenga kumusoro, nemakomborero anobva pasi pakadzika,+ nemakomborero emazamu nechibereko. 26 Makomborero ababa vako achapfuura zvinhu zvakanaka zvemakomo asingagumi, uye achapfuura runako rwezvikomo zvinogara zviripo.+ Acharamba ari pamusoro waJosefa, panhongonya yeuyo akasarudzwa pavana vababa vake.+ 27 “Bhenjamini+ acharamba achibvambura mhuka semhumhi.+ Mangwanani achadya mhuka yaabata, uye manheru achagova zvaanenge apamba.”+ 28 Ese aya ndiwo madzinza 12 aIsraeri, uye izvi ndizvo zvavakaudzwa nababa vavo pavakanga vachivakomborera. Akapa mumwe nemumwe wavo chikomborero chakakodzerana naye.+ 29 Pashure paizvozvo akavarayira achiti: “Ndiri kuiswa kwakaiswa vanhu vekwangu.*+ Ndivigei nemadzibaba angu mubako riri mumunda waEfroni muHiti,+ 30 bako riri mumunda weMakapera uri pakatarisana neMamre munyika yeKenani, munda wakatengwa naAbrahamu kuna Efroni muHiti kuti auite nzvimbo yake yemakuva. 31 Ikoko ndiko kwakavigwa Abrahamu naSara mudzimai wake.+ Ndiko kwakavigwa Isaka+ naRibheka mudzimai wake, uye ndiko kwandakaviga Reya. 32 Munda wacho nebako riri mauri zvakatengwa kuvanakomana vaHeti.”+ 33 Saka Jakobho akapedza kurayira vanakomana vake. Akabva adzorera tsoka dzake pamubhedha, akafema kekupedzisira uye akaiswa kwakaiswa vanhu vekwake.*+
^ Kana kuti “kukudzwa kwangu.”
^ Kana kuti “madzira.”
^ Kureva kuti “Muridzi Wayo.”
^ ChiHeb., “zvichakora.”
^ Kureva, Josefa.